application courrier et khalenda réinitialiser
Kuve nenyaya nenyaya yakavakirwa muKarenda app mukati Windows 10? In ichi chinongedzo, isu tichaona maitiro ekugadzirisa uye kudzorera iyo Kenduru App mukati Windows 10.
Kana iyo Kenduru App isiri kuvhura kana kuva nenyaya, iwe unofanirwa kutanga wamisikidza programu. Kutozoreredza programu kuchanyanya kunogadzirisa nyaya yacho. Asi kana nyaya yacho ikaramba iripo kunyange mushure mekugadzirisazve chigadzirwa, unofanirwa kuedza kudzosera chigadzirwa.
Muchidimbu, edza kumisazve programu. Kana izvo zvikasabatsira, simbisa iyo app.
Dzosera Kaseti app mukati Windows 10
Kumisazve Kenduru app ichaita zvinobva zvangoita rese kutumira iyo Email mail naizvo. Iwe unozorasikirwa nedata rese rakachengetwa muM mail neKarenda app pane ino kifaa, kusanganisira kusaina-mukati.
Step 2: Tsvaga iyo Mail neKendaneti kupinda. Dzvanya pane yekupinda kuti uone Zvinyorwa zvitsvaga batanidza. Dzvanya pairi.
Step 3: Pa Kushandiswa kwekuchengetedza uye reset reapp peji, tinya itangezve bhatani. Ukaona dialog yekusimbisa, tinya iyo itangezve bhatani zvakare kuti uisezve iyo Email uye Karenda.
Vhura iyo Khalenda app ikozvino.
Reinstall iyo yeKarenda app mukati Windows 10
Zvichikosha: Kugadzirisazve iyo Khalenda app zvakare simbisa iyo Email app. Mushure mekusimbazve iyo app, uchafanirwa kusaina muakaunti yako (ma) zvakare.
Step 1: Vhura iyo PowerShell nekodzero dze admin. Kuita izvozvo, kurudyi pane Bhokisi Rokutanga pane bharina rebasa uye ipapo tora Windows PowerShell (Admin) sarudzo. Nenzira imwe chete, unogona kunyora PowerShell muKutanga / taskbar yekutsvaga shamba uye ipapo panguva imwechete cindezela Ctrl + Shift + Pinda makiyi.
Ukaona iyo Mushandisi Akaundi Dzvinyiriri skrini Ehe bhatani.
Step 2: Pahwindo rePowerShell, nyora rairo inotevera uye wobva wadzvanya Enter key kuti usaburitse iyo Email uye Karenda app.
Tora-AppxPackage *windowskutaudzana * Bvisa-AppxPackage
CHERECHEDZA: Kana iwe usingakwanisi kuvhura uchishandisa nzira iyi, tevera nhungamiro iri muKuti 3 yegwaro iri (peta pasi peji kuti uone).
Step 3: Edza kutsvaga iyo yeKhalenda app muKutanga / taskbar ikozvino. Kana isina kushumwa zvinobudirira, hausi kuzoona Email neKarenda app.
Step 4: Iye zvino zvawakabudirira kusunungura iyo Meseji neKarenda app, inguva yekumisikidza nyowani kopi yakafanana kubva Windows Chengeta.
Dzvanya pane izvi Email neKarenda chinongedzo kuvhura otomatiki Mapeji neKarenda peji mune Store app. Dzvanya tora bhatani kuisa zvakafanana. Ndizvo!
Ungangoda kusaina muakaunti yako zvakare.
Reinstall iyo yeKarenda app uchishandisa CCleaner
Kana iwe usingakwanise kusunungura iyo Kenduru app kuburikidza nePowerShell, unogona kushandisa zvechitatu-bato zvishandiso kuburitsa iyo Khalenda app uye wozoisa yakafanana kubva kuChitoro. Mugwaro iri, isu toshandisa iyi yemahara yeCCleaner kuburitsa Kenduru app.
Step 1: Download CCleaner uye gadza zvakafanana paPC yako. Sezvambotaurwa, iyo yemahara vhezheni yeCCleaner yakanaka zvakakwana kune iri basa.
Step 2: Vhura chirongwa cheCCleaner. Enda ku Tools > Uninstall.
Step 3: Tsvaga Mail neKendaneti kupinda kweapp. Kungofa pavanopinda uye pota Uninstall sarudzo. Paunowana dialog yambiro, tinya OK bhatani rekuburitsa Meseji neKarenda.
Step 4: Vhara iyo Store app kana iri kushanda. Shanyira izvi kubatana kweM mail uye Karenda Uye chengetedza tora bhatani kuisa zvakafanana. Ungano! Uchangodzoreredza iyo Kenduru app.
Tariro iwe wakakwanisa kugadzirisa nyaya yeKarenda neiyi giya!
Maitiro ekugadzirisa zvakajairika CCleaner bugs pa Windows 10
10 Akanakisa Karenda maapplication e Windows 10